🏞️ Amapaki nokubuka | Vakashela i-Hultsfred
Izindawo ezinesikhathi sokucabanga
Uma ufuna ukubona u-Hultsfred usohlangothini olusha, elinye lamapaki kamasipala nezindawo zokubuka kuyizindawo ezinhle zokuvakasha. Vakashela amahle Ingadi yethole noma ethokomele Ingadi yemifino
🖼️ Iminyuziyamu nemibukiso
Ukudla sekwakhiwe kabusha ngogqozi oluvela emvelweni ngokhuni nangehlathi njengengqikimba futhi kufakwe izindawo ezintsha eziluhlaza, ukukhanya okusha okuphephile, izindawo zomsebenzi njengokulula
Endaweni yeNkampani kunengadi enhle kakhulu yemifino enamakhambi ahlukahlukene angama-150, izimbali zasehlobo kanye nezikhula iminyaka.
Ipaki eHultsfred isemoyeni womculo, lapho abafundi baseLindblomskolan badwebe imidwebo njengeziphakamiso zendlela abafuna ibukeke ngayo. Eduze nepaki kunezinkantolo zama-boules nezindawo ezinhle eziluhlaza.
IHagadalsparken ithole umfutho wangempela onyakeni owedlule futhi manje isiyatholakala futhi iphephe kakhulu kunakuqala. Isiziba esinokufakelwa
Lapha uzothola ingadi yemifino, imibhede yezimbali engapheli, ingadi yama-rose, ingadi yezithelo, indawo yokubhaka kanye nekhofi nokuthengiswa kwezitshalo. Ingadi iphethwe yinhlangano engenzi nzuzo, eyaqalwa ngo-2004 ngabathandi abaningi
Misterhultsutsikten, Indawo enamagquma ale ndawo isho ukuthi kunezindawo eziningi ezinhle zokubuka. Omunye wemibono emihle kakhulu ongayithola kusuka kuMisterhultsberget uphume ngeVirserumssjön nge